Itoobiya oo si kulul uga jawaabtay eedayn Maraykanku u soo jeediyay
Home WARARKA Itoobiya oo si kulul uga jawaabtay eedayn Maraykanku u soo jeediyay
Wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa hadal dhawaan ka soo yeedhay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ee ahaa Itoobiya iney deegaanka Tigraay ‘Ciribit qowmiyadeed’ ka waddo, ku tilmaantay ‘Mid khalad ah oo aan xaqiiqda ku saleysneyn”.
Warmurtiyeedka wasaaradda waxaa lagu sheegay dowladda Itoobiya dagaalka deegaanka Tigraay ay ka fulisay inuu ahaa mid lagu sugayey ‘sharciga iyo kala dambeynta’, howlgalka marka uu soo dhammaadayna ay jirin ‘Ciribtir qowmiyadeed’ inuu deegaankaasi ka dhicin.
Blinken oo hortegay guddiga arimaha dibedda u qaabilsan Congress-ka ayaa sheegay in loo baahan yahay in gobolka Tigray laga saaro xooggaga Eritrea iyo kuwa deegaanka Amxaarada, laguna bedalo “ciidamo aan tacaddiyo ka geysan doonin gobolkaas.”
Xoghayaha ayaan faahfaahin waxa uu ula jeedo ciidankaas, iyadoo qaar kamid ah xubnaha guddiga ay weydiiyeen in loo baahan yahay in hawlgal nabad ilaalin ah loo diro gobolka Tigray.
“Dhibaatada ka taagan Itoobiya ayaa ah mid weyn. Si dhaw ayaan ula soconaa, gaar ahaan xaaladda Tigray, halkaas oo laga soo sheegay tacaddiyo baahsan oo ka dhan ah shacabka,” ayuu yiri Blinken.
Haddaba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya oo soo saartay warmurtiyeed ay eedda Mareykanka uu u soo jeediyey uga jawaabeyso ayaa sheegtay “Eedda Itoobiya loo soo jeediyey iney tahay iney xaqiiqda ku saleysneyn ayna tahay dacwad khalad ah’.
Antony Blinken wuxuu sheegay xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo dilalka ka dhacay deegaanka Tigraay iney caddeymo u hayaan isaga oo dowladda Itoobiya ka codsatay iney xadgudubyadaasi joojiso.
Mr Bilinken waxaa kale uu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka warmurtiyeed ay horay arrimaha Itoobiya uga soo saartay inuu kala hadlay ra’isal wasaare Abiy Axmed.
“Si weyn ayaan u fahansannahay walaaca uu ra’iisal wasaaraha ka qabo TPLF iyo ficillada ururkaas, balse lama aqbali karo xaaladda ka taagan Tigray, waana in wax laga bedalo,” ayuu sheegay Blinken.
Xukuumadda Addis Ababa oo ka jawaabtay hadal uu dhawaan xoghayaha arimaha dibedda ee Maraykanka ka sheegay xaaladda Tigray, ayaa sheegtay inay ka go’an tahay ka gungaaridda tacaddiyada laga soo sheegay gobolkaas.
Waxaase ay sheegtay in Maraykanka uu u muuqdo mid faragelinaya arrimaha gudaha ee Itoobiya, taasina ay tahay wax laga xumaado.
“Isku-dayga uu Maraykanka uga hadlayo arimaha gudaha ee Itoobiya, gaar ahaan xoogagga gobolka Amxaarada ee lagu sheegay war saxaafadeedka ayaa ah wax laga xumaado,” ayay sheegtay xukuumadda Addis Ababa.
Xukuumadda Ethiopia ayaa garawsatay rabshado ka dhacay qeybo kamid ah Tigray, waxaana ay ballanqaaday inay u oggolaaneyso baarayaal caalami ah inay gaaraan gobolka.
Guddiga xuquuqda aadanaha Itoobiya ayaa billaabay baaritaano ku aaddan wararka sheegaya in dad rayid ah lagu laayay colaadda ka taagan Tigray.
Toddobaadki horana Ra’isal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed wuxuu sheegay ‘xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee la sheegay iney deegaanka Tigraay ka dhaceen si loo baaro xukumaddiisu iney tallaabbooyin u qaadday’ uuna diyaar u yahay inuu diyaar u yahay inuu arrintan kala shaqeeyo midowga Afrika.
Hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo horay warbixin u soo saartay waxay ku sheegtay in boqollaal qof oo rayid ah oo aan hubaysnayn ay ciidammada Eritrea bishii Nofeembar ee sanadkii tegay ku xasuuqeen magaalada taariikhiga ah ee Axum ee waddanka Itoobiya, intii uu socday dagaalkii gobolka Tigray.
Hay’adda Amnesty waxa ay ciidammada Itoobiya kuwa Eritrea ku eedaysay inay gaysteen “dambiyo badan oo dagaal” waqtigii ay wadeen dagaalkii ay magaalada kula wareegayeen
Komishiinka hay’adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michel Bashlet waxay sheegtay waxyaabaha ka dhacay deegaanka Tigraay in lgu sifeyn karo ‘dambiyo dagaal iyo dambiyo loo geystay xuquuqda adanaha.
Hay’adda xuquuqda aadanaha waxay dowladda Itoobiya ka codsatay iney oggolaato baaritaan madax bannaan in lagu sameyo dambiyada dagaal, dil wadareedka, xadgudubka xuquuqda aadanaha iyo tacaddiyada galmo ee la sheegay iney ka dhaceen deegaanka Tigraay.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Dina Mufti wuxuu sheegay dowladda iney baaritan ku sameeyneyso xadgudubyada la sheegay iney kadhaceen deegaanka Tigraay ciddi lagu helo iney falkaasi ka dambeysayna caddaaladda la hor keeni doono.
Previous articleBarnaamijka Hordhaca ah ee Xisbiga/Ururka Dadweynaha Somaliland
Next article“Burco ama Somaliland bay noqonaysa ama meel cid kale xukunto” Jaamac Karaaciin